Nanmalgyi - Page 933 of 969 - News & Entertainment
ဦးကျော်သူရဲ့ ဂုဏ်ပြုခြင်းကို ခံရပြီး အနုပညာရှင်များစွာနဲ့ သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
February 21, 2018 Yuki 0
ဖေ့စ်ဘွက်လူမှု ကွန်ယက်တွင်သာမက အပြင်မှာပါ နာမည်ကြီးလာပြီး ကမ်းလှမ်းမှုတွေ လက်ခံလာရတဲ့ ကျောင်းသူလေး ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက်ကတော့ ခုဆိုရင် မင်းသားကြီး ဦးကျော်သူပေးတဲ့ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်တောင် ရသွားပါပြီ။ သူမ နှစ်သက်တဲ့ အနုပညာနယ်ပယ်မှာ ဒီလို အကယ်ဒမီ မင်းသားကြီးတစ်ယောက်က ပေးအပ်တဲ့ လက်မှတ် တစ်ခုကို ရလိုက်တာဟာ ဘဝအတွက် မှတ်တိုင်လေးတစ်ခုလည်း […]
မိသားစုဘဝ အကြောင်းရင်နင့်ဖွယ် ပြောပြလာတဲ့ ဟာသဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် အောင်ဇော်မင်း
ရုပ်ရှင်လောကမှာ ဇာတ်ပို့တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် အောင်ဇော်မင်း ဟာ သူရဲ့မိသားစု အကြောင်းကို ပြောပြလာပါတယ်။အနုပညာလောကမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်ကိုတော့ ပရိသတ်တွေသိကြမှာပါ။သူကတော့ မေးမြန်းမှုကိုအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ် “အခုလက်ရှိ မိသားစု ကတော့ အကိုကသားတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်ရှိတယ် အကိုသားကအခုလာမယ့် ၂၀၁၈၊၆ လပိုင်း ၁၃ ရက်နေ့ဆိုရင် အသက် ၂၀ ဖြစ်မှာ။ဒါပေမဲ့အကိုသားက ပိုလီယို.. […]
ကမ္ဘာပျက်ချိန် ဖြစ်မယ့် သိပ္ပံနည်းကျ အခြေအနေများ
Here’s What Will Happen If Earth Would Stop Spinning ကမ္ဘာပျက်ချိန် ဖြစ်မယ့် သိပ္ပံနည်းကျ အခြေအနေများ ကမ္ဘာပျက်ရင် ဘယ်လိုအခြေအေနတွေ ကြုံရနိုင်ဆိုတာ လူတိုင်းသိချင်ကြပါတယ်။ဘာသာရေးနဲ့ မနှီးနှောပဲ သိပ္ပံဆိုင်ရာ အချက်အလက်နဲ့ ကြုံရမယ့်အခြေအနေတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ #1. ကမ္ဘာမှာ ပြင်းထန်တဲ့ […]
ကမ္ဘာ့နာမည်အကြီးဆုံး သမိုင်းဝင်ဓားများ Tomoyuki Yamashita’s Sword ဒီဓားဟာ ဂျပန် ဗိုလ်မှူးကြီး Tomoyuki Yamashita ရဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က ဓားဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီကို စင်္ကာပူနဲ့ မလေးမှာ တိုက်စဉ်က သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓားရဲ့ နာမည်ကို “The Tiger of Malaya.” လို့ ပေးထားဖြစ်ပြီး ဒီဓားဟာ […]
ရုတ်တရက်လေဖြတ်လျှင် ချက်ချင်းအကောင်းပကတိဖြစ်အောင်ပြုစုကုသနည်း” ပြုစုကုသနည်းမှာသမားတော်ကြီးဣစ္ဆာသယ ဦးမောင်မောင်၏နည်းဖြစ်ပါသည်။ နက္ခတ္တရောင်ခြည် မဂ္ဂဇင်းတွင် ဆောင်းပါးရှင်၊မြင့်မြတ်ထွန်းက စိတ်ဝင်စား ဖွယ်ရေးသားထားပြီး မကြာမီကပင် လေဖြတ်သလိုဖြစ်၍ ပါးရွဲ့ခြေလက်လှုပ်မရသူမိတ်ဆွေတစ်ဦးအား သမားတော်ကြီး ညွန်ပြပါ နှိပ်ကွက်နေရာလေးများအားနှိပ်ပေးပါရန် အကြံပေးလေရာ(၃)ရက်အကြာတွင် အကောင်းပကတိဖြစ် ခဲ့သည်မို့ အဖြစ်များလှသော လေဖြတ်လေဖြန်းရောဂါ များကြုံခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါလျှင် အသုံးပြုနိုင်ပါရန် ထပ်ဆင့်မျှဝေလိုက်ပါသည်။ လေရောဂါသည်အသက်(၄၀)နှင့်(၆၀)ကြားအဖြစ်များပါသည်။ အအေးများရာက […]
လူတွေဟာ အသက်အရွယ်ကြီးပြီး အဖိုးကြီး အဖွားကြီးတွေ ဖြစ်လာကြပြီဆိုရင် မှတ်ညဏ်တွေက အစ ထုံထိုင်းလာကြပြီး အိုမင်းမစွမ်း ဖြစ်လာကြကာ ဘာမှ သုံးစားလို့ မရကြတော့သည်မှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ယခုလည်း Thinn Shwe Sin Hlaing တို့ရဲ့ ပရဟိတ အဖွဲ့ကတော့ အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ အဖိုးအဖွားတွေကို […]
ပဲခူးတိုင်း ဝေါမြို့နယ်သူလေးရဲ့ ရင့်နင့်စရာ ဖြစ်ရပ်ကို အများသိအောင် ရှယ်ပေးပါ၊
အွန်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့ပြီး အပြင်မှာလက်ထပ်ပေါင်းသင်းကြရင်းခြောက်လကြာမှ သူ့မှာ မယားကြီးနဲ့ကလေးတွေရှိမှန်းသိခဲ့ရတာပါ တဲ့ပဲခူးတိုင်း ဝေါမြို့နယ် (……)ကျေးရွာနေအဖ ဦးသောင်းဟန်ရဲ့ သမီးအငယ်ဆုံးလေးဟာ2016 ကမှ ဆယ်တန်းအောင်ထားတာတာပါ၊ အရွယ်ကလည်းငယ်သေးတော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာစိတ်ကစားရင်း #ဦးဝင်းကိုကိုလတ် ဆိုသူနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်၊ချစ်သူသက်တမ်း နှစ်လအကြာမှာ #ဦးဝင်းကိုကိုလတ် ဆိုသူကအပြင်မှာတွေ့ချင်တယ် မောင့်ကိုချစ်ရင်မောင်ချိန်းတဲ့နေရာကိုလာခဲ့ပါဆိုလို့အရဲစွန့်ပြီးသွားခဲ့ပါ လို့ကာယကံရှင်မိန်းကလေးကပဲခူတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးမှာ ထွက်ဆိုပါတယ်၊ထို့နောက်… #ဦးဝင်ကိုကိုလတ် ဆိုသူမှာFacebook ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပုံကတစ်မျိုးအပြင်မှာတွေ့တော့တစ်မျိုးနဲ့လူမှားတာပဲထင်ပြီး ကာယကံရှင်အမျိုးသမီးကပြန်လှည့်အထွက် ဦးဝင်းကိုကိုလတ်ကလက်ကိုလှမ်းစွဲရင် […]
သွေးတိုးရောဂါ အတွက် အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ငါးသလောက်ပေါင်းစားလို့ရတဲ့ ဆေးကောင်းတစ်ခွက်
တောဇီးဖြူ(တောင်ရှားဖြူ)လို့လဲခေါ်တယ် ၊ ခြံဝင်းများ၌ပေါက်ပါသည် ဆယ်ပင်ခန့် နှုတ် အမြစ်ပါ ရေစင်အောင်ဆေးပြီး သုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ပြုတ်ပါ ။ မနက်တစ်ခွက် ညတစ်ခွက် အကြမ်းပုဂံနှင့်သောက်ပါ ။ နောက်တစ်နည်း အိမ်ကြက်ဥအား ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ဖန်ခွက်ထဲထည့်ပါ။ ဗမာသံပုရာသီး လေးလုံးခန့်ကြက်ဥမြုပ်သည်အထိ ညှစ်ထည့်ပြီးဖန်ခွက်အားအုပ်ထားပါ ။။ Image may contain: plant, […]
ခရီးသွားရင်း အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းဆန်း 15 မျိုး
ခရီးသွားရင်း အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းဆန်း 15 မျိုး #1. ဒီပစ္စည်းလေးကတော့ ကော်လံနဲ့တူပြီး လည်တိုင်ကို ထောက်ခံပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။သိပ်များထူးဆန်းနေမလားမသိဘူး။ဒါဟာ ခရီးသွားလို့ အိပ်တဲ့အခါ ဇက်ကို မလည်အောင် ဇက်မတောင့်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ #2. ဂျပန်က ထွင်ထားတဲ့ အဲယားကွန်းအကျီင်္ပါ။သူတို့လို အအေးပိုင်းဒေသက နည်းနည်းလောက်ပူတာကို အကာအကွယ်ယူဖို့ထုတ်တာဖြစ်ပေမယ့် အပူပိုင်းက လူတွေတော့ သေသွားစေနိုင်ပါတယ်။ […]
” ကမ္ဘာကတောင် သိနေပြီ”
” ကမ္ဘာကတောင် သိနေပြီ” —————————– တလောက ဘုန်းကြီးရန်ကုန်သွားတော့”Mahachulalongkorn University”ကပါမောက္ခအဆင့် နိုင်ငံခြားသားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဘုန်းကြီးကို ဘာမေးတုန်းဆိုတော့- “အရှင်ဘုရား မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာတွေမညီညွတ်ဘူး”လို့ကြားတယ်တဲ့ ဘုန်းကြီးက”အေး ဟုတ်တယ်”လို့..သူက “ဘာကြောင့်လဲ”တဲ့.. ဘုန်းကြီးက “ဘာကြောင့်မှ မဟုတ်ဘူး”လို့”တို့ လူမျိုးတွေရဲ့ သွေးသားကြောင့်ဖြစ်တာ”လို့ ဖြေလိုက်တယ်.. “မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ” “one man showနဲ့ […]
« 1 … 932 933 934 … 969 »